Jiilka cusub ee PlayStation VR oo loogu talagalay PS5 ayaa laga yaabaa inay soo daadatay - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Jiilka dambe ee 'PlayStation VR headset' ee loo yaqaan 'PS5' ayaa laga yaabaa inuu cararay
Saacado uun ka dib markii Sony ay ku dhawaaqday magaca ugu dambeeya iyo daaqadda daaqadda ee PlayStation 5, LetsGoDigital ayaa dib u bilaabay diiwaangelinta rukhsad wixii ku noqon kara madaxa PlayStation VR ee soo socda. Waad xasuusan kartaa LetsGoDigital oo ah goob markii ugu horraysay daabacday patent-ga qalabka horumarinta PS5, kaas oo waxay ku saleysan tahay warbixintii ugu dambeysay ee banki horumariyayaashu way helaan. Marka loo eego patent-kan, ayaa hadda la sii daayay toddobaadkan .
Sawirada keydka ayaa muujinaya muuqaal madax aad u caan ah, laakiin leh qaar ka mid ah wax ka beddellada muhiimka ah. Dhanka kale, waxaa jira afar kamaradood oo dhamaantood ah: laba hore dhanka HMD, mid dhabarka iyo midna kuxidiyaha xakameynta PlayStation Move. Qalabka madaxa wuxuu sidoo kale ku daraa LED-yada si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada, iyo sidoo kale makarafoon ku dhex dhismay.
Kaamiro gooni ah (sida kamarad PlayStation oo la socota nooca PSVR ee hadda jira) ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa saxsanaanta intaa ka sii badan. waa la raacay, laakiin lama oga haddii tani ay daruuri u noqon doonto in lagu shaqeeyo aaladda. Madax-madaxeedyada xaqiiqada dhabta ah ayaa si aad ah u kordhay saddexdii sano ee la soo dhaafay tan iyo markii PSVR ay timid goobta. La yaab ma noqon doontid inaad aragto aaladda oo isku dhafan tiro balaadhan oo ah astaamo iyo awoodo cusub ka hor intaadan bilaabin dhamaadka 2020 ama
Source source: LetsGoDigital
LetsGoDigital sidoo kale waxay muujineysaa in Sony ay ka wada hadlayaan soo saarida warshadda madax-weyne ee wireless-ka ku shaqeysa. patent-ka, laakiin tani waxay u baahan tahay Sony in lagu daro isku xirnaanta Bluetooth iyo in lagu daro il awoodeed iyo isha codka iyo codka muuqaalka.
Ugu dambeyntiina, Sony sidoo kale waxay ka hadashay "hab hufan" patent-ka, taas oo umuuqata inay macnaheedu tahay inaad wali awood u yeelan doonto inaad ugu yaraan qeyb ahaan u aragto adduunka dibadiisa inta aad xirxireyso koofiyadda oo aad ku dul soconeyso menus ama shaashadda. shaashadda guriga kahor intaadan bilaabin ciyaar. Sida muuqata, muraayad waa habka ay u adeegsadaan Sony tan si ay u shaqeyso, sidoo kale waxay fureysaa suurtagalnimada codsiyada iyo cayaaraha Agoosto Xaqiiqada ah (AR) oo ah PSVR 2.
Waa in la ogaadaa in sugitaanka u dhexeeya bilawga PS4 iyo bilowga PSVR uu socday seddex sano, laakiin hadda haddii Sony ay iskaa aasaasayso suuqa dhabta ah ee dhabta ah, 2 PSVR ayaa laga yaabaa inuu si dhakhso leh u yimaado.
Isha Sawirka: Jacob Siegal | BGR
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://bgr.com/2019/10/09/playstation-vr-2-leak-ps5-images-features/
Hong Kong, Apple waxay ka baxday codsi ay mudaaharaadyada u adeegsanayeen booliiska - Tech - Numerama